Best उत्तम प्रोग्रामहरू PC 🥇 Emulator.online ipe 🥇 मा स्वाइप गर्न
पीसी मा best उत्तम स्लाइड शो सफ्टवेयर
जो कोही स्लाइडशो निर्माता आवश्यक छ धेरै विकल्पहरू हुनसक्छन्, या त कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न वा ब्राउजरमा अनलाइन प्रयोग गर्न। त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई पाठ, संगीत, फोटो र भिडियोहरूको साथ प्रस्तुतीकरणहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। धेरै जसोमा, यो सुन्दर बनाउन यी प्रकारको अनुप्रयोगहरूमा अनुभव लिन आवश्यक छैन। चेक आउट गर्नुहोस्!
प्रेजी गतिशील प्रस्तुतिहरू सिर्जना गर्न चाहनेहरूको लागि आदर्श विकल्प हुन सक्छ। स्लाइडहरूले स्मार्ट आन्दोलनहरू प्रदर्शन गर्दछ र जुमलाई तपाईंको टकटहरूलाई निर्देशित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ रेडीमेड टेम्प्लेटका लागि धेरै विकल्पहरू छन् जुन पूर्ण रूपमा सम्पादन योग्य छ, जसमा तपाईं ग्राफिक्स, यूट्यूब भिडियो, र फोटोहरू सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क योजना (आधारभूत) ले तपाईंलाई projects वटा परियोजनाहरू कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ, जुन सेवाका अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई दृश्यात्मक हुन्छ। तपाईं अन्य व्यक्तिलाई तपाइँको काम अनलाइन सम्पादन गर्न आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रेजी (नि: शुल्क, भुक्तान योजना विकल्पहरूको साथ): वेब
पावरपोइन्ट अग्रगामीहरु मध्ये एक हो जब स्लाइडशोको बारेमा आउँदछ। कार्यक्रम दर्जनौं टेम्पलेट्स र अनुकूलन संक्रमण र एनिमेसन प्रभाव को एक किसिम को प्रदान गर्दछ। यो अन्य तत्वहरू बीच भिडियो, फोटो, संगीत, ग्राफिक्स, तालिकाहरू सम्मिलित गर्न सम्भव छ।
प्रयोगकर्ताले प्रस्तुतीकरणको स्क्रिन रेकर्डिंग समारोहमा पनि गणना गर्न सक्दछ, कथन सहित। साथै नोटहरू लिँदै जुन प्रस्तुत छन् उनीहरूलाई मात्र दृश्यात्मक हुनेछ। सफ्टवेयर ती जो धेरै अफिस सुइटमा पहिले नै अन्य अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दछ को लागी धेरै सहज हुन्छ।
PowerPoint (भुक्तानी गरिएको): विन्डोज | म्याकोस
PowerPoint अनलाइन (नि: शुल्क, भुक्तान योजना विकल्पको साथ): वेब
3 Zoho शो
जोहो शो पावरपोइन्टसँग मिल्दोजुल्दो अनुप्रयोग हो, स्वतन्त्रताको फाइदाको साथ। Pptx मा सामग्री खोल्न र बचत गर्न सक्षम भई सेवा पनि माइक्रोसफ्ट अनुप्रयोगसँग उपयुक्त छ। अनलाइन, तपाईलाई people भन्दा बढी व्यक्तिको साथ सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ भुक्तान नगरी।
एप्लिकेसनले दर्जनौं स्लाइड टेम्प्लेट र थिम प्रदान गर्दछ, जुन सजिलैसँग मिसिन सकिन्छ। फोटो, GIFs र भिडियोहरू सम्मिलित गर्न सम्भव छ (पीसी वा युट्यूबबाट) र ट्विटरबाट लिंकहरू समाहित गर्दछ र केहि अन्य साइटहरू जस्तै साउन्डक्लाउड। त्यहाँ संक्रमण संक्रमण र छवि सम्पादनको लागि उपकरणहरू छन्।
Zoho शो (नि: शुल्क, भुक्तान योजनाहरु को लागी एक विकल्प को रूप मा): वेब
Google. Google प्रस्तुतिकरण
गुगल स्लाइड (वा गुगल स्लाइड) ड्राइभ प्याकेजको अंश हो। ईन्टरफेस प्रयोग गर्न सजिलोको साथ, यसले स्क्रिनको दायाँपट्टि विषयवस्तु विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। टेम्पलेट संपादन प्रकार्यहरू उपकरणपट्टीमा हाइलाइट हुन्छन्।
प्रोजेक्ट एकै समयमा धेरै व्यक्तिहरू द्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, केवल सर्जकले लि link्कलाई सूचित गर्दछ वा आमन्त्रित गर्दछ। अनुप्रयोगले तपाइँलाई फोटो, ध्वनि, तालिका, ग्राफ, रेखाचित्र, यूट्यूब भिडियो, आदि सम्मिलित गर्न अनुमति दिन्छ। परिणाम अनलाइन हेर्न वा pptx, पीडीएफ, JPEG, अन्य ढाँचाहरूको बीचमा बचत गर्न सकिन्छ।
गुगल प्रस्तुतीकरण (निःशुल्क, भुक्तान योजना को विकल्प संग): वेब
Yn. मुख्य सम्मेलन
एप्पल उपकरणहरूको प्रस्तुतीकरणको लागि नेटिभ कार्यक्रम, केनोटसँग धेरै टेम्पलेटहरू छन् जो समय बर्बाद गर्न चाहँदैनन्। अझै दर्जनौं संक्रमण प्रभावहरू छन्। तपाईं छायाँ र बनावटको साथ पाठ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ र वस्तुहरू, जस्तै आकार र छविहरूको पथ कोर्न सक्नुहुन्छ।
प्रयोगकर्ताले फोटो, भिडियो, संगीत, अन्य तत्वहरूमा घुसाउन सक्दछ। यदि आईक्लाउड एकीकरण सक्षम पारिएको छ भने, सम्भव छ अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पादन गर्न सम्भव छ, यदि उनीहरू विन्डोज प्रयोग गर्दै छन् भने। अनुप्रयोगले pptx परियोजनाहरू पढ्न सक्छ र तिनीहरूलाई Microsoft सफ्टवेयर ढाँचामा बचत गर्न सक्दछ।
मौलिक (नि: शुल्क): म्याकोस
जेनिअली प्रस्तुतीकरण अनुप्रयोगहरूको ज्ञान बिना नै सुन्दर स्लाइडहरू बनाउन विकल्प हो। वेबसाइट लेआउट को एक विस्तृत विविधता संग, विभिन्न टेम्पलेट्स प्रदान गर्दछ। त्यहाँ चित्रहरू, छवि वा वाक्यांशहरू, टाइमलाइन, र अधिकको साथ स्लाइडहरूको लागि विकल्पहरू छन्।
त्यसैले तपाईंलाई चाहिने चीजहरू प्रयोग गर्नुहोस् र अन्यहरू खारेज गर्नुहोस्। तपाईं प्रत्येक सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र फोटोहरू, GIFs, भिडियोहरू, र अडियोहरू, साथै अन्तर्क्रियात्मक ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ। केवल एक मात्र चीज नि: शुल्क संस्करण सेवा को अन्य प्रयोगकर्ताहरु को लागी उपलब्ध छ।
राम्रोसँग (निःशुल्क, भुक्तान योजना को विकल्प संग): वेब
Ice. आइसक्रीम स्लाइड शो निर्माता
आइसक्रीम स्लाइड शो निर्माता पीसीमा प्रोग्राम डाउनलोड गर्न र अफलाइन काम गर्न चाहनेहरूको लागि अर्को विकल्प हो। अनुप्रयोग संगीतको साथ फोटोग्राफिक प्रस्तुतीकरणहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हो।
तर सम्भव छ पाठ सामग्री घुसाउन र प्रत्येक स्लाइडको लागि बिभिन्न अडियो वा समान प्रोजेक्ट भर गीत प्रयोग गर्न। नि: शुल्क संस्करणले तपाईंलाई परिणाम वेबममा मात्र बचत गर्न अनुमति दिन्छ र प्रति प्रस्तुतीकरण १० फोटोहरूको सीमा प्रदान गर्दछ।
आइसक्रीम स्लाइड शो निर्माता (सीमित संसाधनको साथ नि: शुल्क): विन्डोज
१०. एडोब स्पार्क
एडोब स्पार्क एक अनलाइन सम्पादक हो जसले एक सहज प्रस्तुतीकरण उपकरण प्रदान गर्दछ। विषयवस्तु विकल्पका साथै स्क्रिनको दायाँपट्टि क्लिक गर्न योग्य स्लाइड डिजाइनहरू पनि छन्। यो फोटो, भिडियो, पाठ, संगीत सम्मिलित गर्न को लागी सम्भव छ र तपाईंको भ्वाइस लाई रेकर्ड गर्न पनि।
प्रत्येक छवि को अवधि सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तल्लो दायाँ कुनामा। यदि तपाईं बहु हातहरू सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं लिंक साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ वा कसैलाई आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ। सामग्री अनलाइन हेर्न वा भिडियो ढाँचा (MP4) मा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। नि: शुल्क संस्करणमा एडोब स्पार्क लोगो समावेश छ।
एडोब स्पार्क (नि: शुल्क, तर भुक्तान योजनाहरू): वेब
राम्रो स्लाइड शो बनाउनको लागि सुझावहरू
निम्नलिखित सुझावहरू आरोन वेनबर्गबाट ​​छन्, TED का लागि UX नेता, छोटो, बहु-विषयगत सम्मेलन परियोजना। सामग्री पूर्ण रूपमा TEDBlog मा उपलब्ध छ। ती मध्ये केही जाँच गर्नुहोस्।
१. दर्शकहरूको बारेमा सोच्नुहोस्
तपाइँको प्रस्तुतीकरणलाई आधार बनाउने एनोटेसन उपकरणको रूपमा स्लाइडहरू नसोच्नुहोस्। तिनीहरूलाई सार्वजनिक बनाउनु पर्छ, ध्यानमा राखिएको दृश्य अनुभवको वितरणलाई ध्यानमा राखेर के भनिएको छ।
धेरै पाठ प्रविष्टि नगर्नुहोस्। वाईनबर्गका अनुसार यसले श्रोताको ध्यान बाँडछ, जसले के लेखिएको छ वा के भनिएको छ सुन्न जान्दैनन्। यदि कुनै विकल्प छैन भने विषयवस्तुहरूमा सामग्री वितरण गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई एक पटकमा एक देखाउनुहोस्।
२. दृश्य मानक राख्नुहोस्
प्रस्तुतिकरणमा र color्ग टोनहरू, फन्ट कोटीहरू, छविहरू, र ट्रान्जिसनहरू राख्न प्रयास गर्नुहोस्।
Over. प्रभावहरु लाई अधिक नगर्नुहोस्
यसले संक्रमण पनि प्रयोग गर्दैन। विशेषज्ञको लागि, अधिक नाटकीय विकल्पहरूले उनीहरूको प्रस्तुतीकरण यति बोरिंग हुनेछ भन्ने धारणा दिन्छ र केवल ती बढाइचढाइ प्रभावहरूले श्रोतालाई उनीहरूको उदासिनताबाट हटाउँदछ।
यी स्रोतहरूको मध्यम मोडमा प्रयोगको स Ind्केत गर्नुहोस् र प्राथमिकता केवल ती अधिक सूक्ष्म छन्।
Videos. भिडियोहरूमा अटोप्ले प्रयोग नगर्नुहोस्
केहि प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमहरूले तपाईंलाई स्लाइड खुल्ने बित्तिकै भिडियोहरू प्ले गर्न अनुमति दिन्छ। वाएनबर्ग वर्णन गर्दछ कि धेरै चोटि यो फाइल चलाउन सुरू गर्न लामो समय लिन्छ र प्रस्तुतकर्ताले पिन क्लिक गरेर फेरि एक पटक प्रयास गर्न सुरू गर्दछ।
परिणाम: अर्को स्लाइड धेरै चाँडै देखा पर्नेछ। यस प्रकारको प्रतिबन्धहरूलाई वेवास्ता गर्नका लागि उत्तम विकल्प अप्ट इन गर्नु हुँदैन आत्म प्रजनन.
तपाईंको मोबाइलमा फोटोहरू र संगीतको साथ भिडियोहरू बनाउन नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू
कसरी PowerPoint मा एक ब्यानर बनाउन को लागी सम्पादन गर्न को लागी बिना
उत्तम नि: शुल्क र अनलाइन पाठ सम्पादकहरू